Itoobiya Oo Qiratay In Ciidankeedu Ay Rasaaseeyeen Shaqaale Ka Tirsanaa Qaramada Midoobey – somalilandtoday.com
Itoobiya Oo Qiratay In Ciidankeedu Ay Rasaaseeyeen Shaqaale Ka Tirsanaa Qaramada Midoobey
(SLT-Addis Ababa)-Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidankeeda ay rasaaseeyeen shaqaalo ka tirsan Qaramada Midoobay, kaddib marki ay shaqaalahani ka gudbeen laba bar-koontarool oo aanan loo ogolaan si ay u gaadhaan gobolka ay dagaalladu ka socdaan ee Tigray.
Redwan Hussien oo ka mid ah saraakiisha sare ee dowladda Itoobiya, ayaa salaasadii shalay isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa wariyaasha u sheegay, in dhacdadani ay dhacday Axaddii xilli ay shaqaalaha Qaramada Midoobay isku dayayeen in ay gaadhaan xerada qaxootiga ee Shimelba oo ay daganyihiin qaxooti Eritrean ah.
Shaqaalahani ayaa la xidhay, balse marki danbe lasii daayay sida uu xaqiijiyay sarkaalkani u hadlay dowladda Itoobiya.
Afhayeenka Qaramada Midoobau Stephane Dujarric ayaa sheegay in warka kasoo yeedhay Itoobiya uu yahay mid laga naxo.Isaga oo ku boorriyay dowladda federaalka Itoobiya in ay ka hortago dhacdadani oo kale mustaqbalka.
Qaramada Midoobay iyo hey’adaha kale ee samafalka caalamiga ah ayaa aad isugu dayaya in ay gargaar bani’aadannimo gaadhsiiyaan ku dhawaad hal milyan oo qof oo ay barakiciyeen dagaaallada sokeeye ee ka socda Waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Itoobiya.